Budata Candy Monster APK maka Android
Budata Candy Monster
Budata Candy Monster,
Candy Monster bụ egwuregwu nka nwere ike ịme na ekwentị gam akporo na mbadamba.
Onye ụlọ ọrụ egwuregwu Turkey Pabeda mebere, Candy Monster bụ otu nime ihe nrụpụta na-anwale ndidi na oke nke ndị egwuregwu. The Candy Monster, nke nwere myirịta na egwuregwu a na-ewu ewu nke ụdị a, aa, na-eme ka anyị na-agagharị na gburugburu ọzọ. Oge a, kama isi nelu gbadaa, anyị na-agbalị isi nala ala elu. Ebumnuche anyị bụ isi na egwuregwu ahụ bụ ịnakọta swiiti niile.
Na Candy Monster, nke nwere ihe karịrị nkeji 1200, agwa anyị gbagharịrị gburugburu. Adụkọta candies na ihe mgbochi ojii na gburugburu. Mgbe anyị metụrụ ogwe ojii aka, anyị na-atụfu ngalaba ahụ. Ebumnuche anyị bụ ịnakọta candies na agwa anyị na-amali elu mgbe anyị metụrụ ihuenyo ahụ aka. Candy Monster, nke jisiri ike dọta uche ya na usoro ntụrụndụ ya na egwuregwu dị mma, bụ otu nime egwuregwu ndị nwere ike ịnwale.
Candy Monster Ụdịdị